Promoting Weku in Steemit — Steemit
Promoting Weku in Steemit
mmunited (66) in steempress •3months ago
ဒီပိုစ့်မှာတော့ Weku ကို promotion လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မက်လုံးလေးနဲ့ပဲပေါ့။ ဘာလုပ်ဖို့ လိုသလဲ ဆိုတာကို အရင်ပြောပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်က discord ကို join လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် အောက်ကပုံမှာ ပြထားတဲ့ general ဆိုတဲ့နေရာကို ရောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ Introduction post တစ်ခု ရေးပြီး introduction-post ဆိုတဲ့ နေရာမှာ လင့်ခ်ချပေးပါ။ တစ်ခါပဲ ချပေးဖို့လိုပါတယ်။ နောက်လုပ်ရမှာတစ်ခုကတော့ Weku ပေါ်မှာ active ဖြစ်ပေးဖို့ပါပဲ။
ဒါဆိုရင် ဘာတွေ ရမလဲ။ Introduction post တင်လိုက်တဲ့အတွက် Weku ၁၀၀ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ Weku ပေါ်မှာ active ဖြစ်ရင် တစ်လကို နောက်ထပ် ၁၀၀ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့များ Weku ကို အခုမှ စပြီးတော့ လုပ်တဲ့သူ ဒါမှမဟုတ် Rep 60 အောက်နည်းတဲ့သူတွေ ဆိုရင်တော့ Rep ၆၀ ပြည့်တဲ့အထိကို ကူညီပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ လင့်ခ်ကို သုံးပြီးတော့ပဲ ဝင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ အခြားသူတွေကို invite လုပ်တဲ့အခါမှာလဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ လင့်ခ်ကိုပဲ သုံးပေးပါ။ ဒါမှ Weku ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Invite လုပ်တဲ့သူက promoter ဖြစ်နေမှ အထက်ပါ အခွင့်အရေးတွေ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Weku ကို အသစ်လုပ်မယ့်သူတွေကတော့ အပေါ်ကလင့်ခ်ကနေ sign up လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီမယ့်သူတွေ ရှိလာပါပြီ။
@bobokyaw, @thrua, @mamamyanmar, @aggamun, @naythan, @khinzawlatt, @htunnaingwin, @myothuzar.
Dear friend, I would like to invite you to join our wonderful community and beapart of the early adopter WeKu program. WeKu isanew generation Blockchain Social Media Platform.
You can blog or share your story and earn rewards. WeKu is similar to Steemit or Whaleshares. You can earn WeKu tokens asareward for your posts. The reasons why you should join WeKu
Weku has free registration and you will have your account within 10 min
We offer users 200WP delegation
WeKu is tradable on Bitshares exchange
WeKu hasadirect gateway to Steem
We have many curation projects that support users
Register here: https://weku.io/ Join the WeKu-Promotor discord and drop your introduction post and receive 100 WEKU welcome bonus:
Posted from my blog with SteemPress : http://steemhosting.com/myanmarpress/?p=375
steempress myanmar community promotion weku
3 months ago by mmunited (66)
htwegyi (60) ·3months ago
ဘယ်လင့်ခ်ကို ညွှန်ရမလဲတော့ မသိဘူးဗျ။ ဒါပေမဲ့ သူက လဲ support ပေးတာတော့ ကောင်းတယ်ဗျ။ အဓိကအချက်ကတော့ လူများများ သုံးလာရင် ကိုယ့်ပိုက်ဆံတွေ တန်ကြေးရှိလာတာပါပဲဗျာ။
naythan (61) ·3months ago
စပေါ်တုန်းက ဖွင့်ထားပြီး မသုံးဖြစ်ခဲ့ဘူး ။ သို့လော သို့လောနဲ့ စကားတွေထွက်ခဲ့လို့ မသုံးခဲ့တာ ။
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ရက်နှစ်ကမှ post တစ်ခု နှစ်ခု ထပ်တင်ဖြစ်တယ် ဆရာ
sanhtun အကောင့်နဲ့ ဖွင့်ထားတာ
နောက်ထပ် naythan အကောက်ဖွင့်ပြီးသုံးရင် အဆင်ပြေမလား ဆရာ rp ကလဲနဲနေသေးလို့ @mmunited